चीन र अमेरिकाबीच ७ घण्टा लामो वार्ता, रुस-युक्रेनलाई काउन्टर दिदै भयो यस्तो सहमति — Imandarmedia.com
चीन र अमेरिकाबीच ७ घण्टा लामो वार्ता, रुस-युक्रेनलाई काउन्टर दिदै भयो यस्तो सहमति
काठमाडौँ। अमेरिका र चीनबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। दुई देशका अधिकारीहरूले सोमबार युक्रेन र रुसको युद्धका विषयमा ७ घण्टा लामो छलफल गरेका हुन्। विश्वका दुई ठूला देशबीचको वार्ता रोममा भएको थियो।
परिचय खुलाउन नमानेका अधिकारीले बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले चीनका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ याङ जिचीलाई बेइजिङले रुसलाई सहयोग गर्न सक्ने विषयप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।
चीनले रुसलाई सहयोग गरेमा विश्वव्यापी प्रतिबन्धको सामना गर्न सक्नुपर्ने सुलिभानले वार्तामा बताएका छन्। सामान्य रुपमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी रुससँग चीनको साठगाठप्रति गहन चिन्तित छौ, ती अधिकारीले बताए।
मस्कोले युक्रेनमा आफ्नो युद्धका लागि चीनसँग सैन्य उपकरणको अनुरोध गरेको समाचार बाहिरिएकै समयमा सुलिभानको यो भ्रमण भएको हो। रुस–युक्रेन युद्ध तेस्रो सातामा प्रवेश गरिसकेको छ।
उक्त बैठक केही समयका लागि मात्रै तय गरिएको थियो,’ ती अधिकारीले बताए ।मस्कोले सैन्य उपकरण तथा युक्रेनी युद्धमा अन्य सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको विषय चीनले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ।
रुसले चीनबाट सैन्य उपकरण मागेको विषय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले पनि गलत भएको बताएका छन्। त्यस्तै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेका छन्।
टेलिभिजनमा सम्बोधनमा गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले आफ्नो देशमा आक्रमण गर्दा चेचन्या द्वन्द्वमा भन्दा बढी क्षति बेहोरेको बताएका छन। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धले केही हासिल नहुने कुरा उनीहरुले बुझ्न थालेको उल्लेख गरेका छन्।
रुसी सेनालाई बाच्न चाहन्छौ? भन्दै प्रश्नमार्फत जेलेन्स्कीले भनेका छन्। आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई मानिसको रूपमा सभ्य रूपमाू व्यवहार गरिनेछ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसमा राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।
सत्य उजार गर्न उनीहरुले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका हुन। दुईदेशबीचको वार्ताका सम्बन्धमा राम्रो प्रगति भएको उनले आफ्नो सम्बोधनमार्फत बताएका छन्।
तेस्तै, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेका छन्।टेलिभिजनमा सम्बोधनमा गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले आफ्नो देशमा आक्रमण गर्दा चेचन्या द्वन्द्वमा भन्दा बढी क्षति बेहोरेको बताएका छन।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धले केही हासिल नहुने कुरा उनीहरुले बुझ्न थालेको उल्लेख गरेका छन्।रुसी सेनालाई बाच्न चाहन्छौ? भन्दै प्रश्नमार्फत जेलेन्स्कीले भनेका छन् आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई मानिसको रूपमा सभ्य रूपमाू व्यवहार गरिनेछ।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसमा राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । सत्य उजार गर्न उनीहरुले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका हुन।
दुईदेशबीचको वार्ताका सम्बन्धमा राम्रो प्रगति भएको उनले आफ्नो सम्बोधनमार्फत बताएका छन्। युक्रेनमाथि रुसले हमला गरेसँगै सर्बसाधारण युक्रेनीको जीवन त कस्टकर नै बनेको छ, तर युद्धको असरमा रुसमा पनि गहिरो देखिएको छ।
युक्रेनको युद्धको विरोधमा एउटा रुसी समूह खुलेरै सडकमा उत्रिएको छ भने अधिकांश मानिस मंहगी र अभावसँग जुधेका छन् ।युक्रेनमा रुसी हमलापछि पश्चिमा देशहरुले मस्कोमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
रुस निर्यात हुने सामाग्रीहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण रुसी परेका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गरेको भन्दै रुसी कदमको बचाउ गरे पनि पश्चिमा देशहरुले पुटिनले युद्धका बहाना गरेकोे बताउँदै आएका छन् ।
रुसमाथि पश्चिमा देशहरुले वित्तिय दण्ड दिएका छन्। अन्तर्र्राष्ट्रिय कम्पनीले त्यहाँको सञ्चालन स्थगित गर्दा रुसीहरुको दैनिकीमा असर परेको छ। जीवनयापनको खर्च बढिरहेको छ। रोजगारी गुम्ने जोखिम बढ्दो छ। धेरै वित्तीय संस्थाहरू रुसबाट अलग भएका छन्।
पकाउने तेल, चिनी र अन्य आधारभूत उत्पादनको मूल्य बढिरहेको छ। उपभोत्ता मूल्य २ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ। मस्को र अन्य सहरका पसलहरूले औषधि र अन्य केही वस्तुको बिक्रीमा रोक लगाएको छ।
२४ फेब्रुवरीदेिख सुरु भएको रुसी हमलापछि रुसी मुद्रा रुबलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। २० फेब्रुबरीसम्म ५ हजार ५०० रुबलमा अर्डर गरेको किराना सामानको मूल्य ८ हजार रुबल रहेको इयूका बासिन्दा जानले बताएका छन्। त्यस्तै चिनीको मूल्य २० प्रतिशत बढेको छ।